Manana Olana Homamiadan’ny Lalan-jaza i Nikaragoà. Ezahan’ny Fambolena Kafe Ny Manampy. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2016 16:31 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Español, Ελληνικά, English
Maritza Blandón, mpamboly kafe any amin'ny tendrombohitr'i Nikaragoa, nanao ny fitiliana “pap” voalohany tamin'ny faha-47 taonany. Nanao fitiliana HPV aloha izy ary nahazo fitsaboana. Reny tokantena i Blandón. Raha matin'ny homamiadan'ny lalan-jaza izy, tsy misy olona ho afaka hikarakara ireo zanany valo. Sary: Shuka Kalantari/PRI
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org ny 18 Aogositra 2016, ity lahatsoratra avy amin'i Shuka Kalantari ity. Naverina navoaka eto ho anisan'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Mitsingoloka eo amin'ny zanaka kafe mitandahatra ao amin'ny toeram-pambolena iray ao Matagalpa i Maritza Blandón, any amin'ireo tendrombohitra Avaratr'i Nikaragoa. Miasa miaraka amin'ireo vehivavy hafa vitsivitsy mpamboly kafe izy, izay miaina sy miasa eto miaraka amin'ireo zanany. Mitovy amin'i Blandón ny ankamaroan'izy ireo: tokantena miaraka amin'ireo zanany.
“Sady reny aho no ray ho an'ireo zanako,” hoy izy sady manala ireo ahitra amin'ireo zanaka kafe.
Niteraka ireo zanany valo tao an-trano i Blandón ary tsy mbola nankany amin'ny hopitaly mihitsy teo aloha. Ary volana vitsivitsy teo aloha, nisy mpamboly kafe iray hafa, namana, hita ho nisy homamiadan'ny làlan-jaza. Nihanaka tany amin'ny tsinainy io. Maty sivy andro nialohan'ny nifanenako tamin'i Blandón izy.
Iray amin'ireo manana ny taha ambony indrindra amin'ny fahafatesana vokatry ny homamiadan'ny lalan-jaza ao Amerika manontolo i Nikaragoà. Ireo vehivavy toa an'i Blandón, any amin'ireo toerana ambanivohitra, no tena mety ho tsy hahazo fitsaboana.
Angon-drakitry ny firenena, nanomboka ny taona 2009 na ny taona farany. Taham-pahafatesana ampifanarahana amin'ny taona (ASMR) no teknika nampiasaina mba hampitahàna ireo mponina samihafa raha samihafa ny taonany. Loharano: OMS. Sary avy tamin'i Kuang Keng Kuek Ser ho an'ny PRI. Tsindrio ny sary raha hitsidika ny tabilao ifandrimbonana ao amin'ny PRI.org
Tamin'ny faha-47 taonany, nandeha tany amin'ny toeram-pitsaboana i Blandón ary nanao fitiliana “pap”. Fotoana voalohany tamin'ny fiainany nahitàny dokotera io. Hita ho nitondra ny tsimokaretina “human papilloma virus” HPV izy — zavatra iray lehibe mety mitondra ny homamiadan'ny làlan-jaza. Nahazo fitsaboana teo noho eo izy, ary ankehitriny mandeha matetika any manao fanarahamaso. (Fanamarihana: Tsy misy fandaharanasa matotra ho fanaovana vakisiny miady amin'ny HPV any Nikaragoà amin'izao fotoana izao).
Milaza i Blandón fa tsy afaka manapaka andro iasàna izy, fa amin'ny maha reny tokantena azy, tsy afaka ny ho faty ihany koa izy.
Mamboly kafe miaraka aminy ihany koa ilay namany, Mely Montenegro. Nandresy lahatra an'i Blandón mba hanao fitilana pap izy. Nanao izany ny tenany nandritra ny dimy taona teo aloha, ary tsy maintsy notsaboina HPV ihany koa. Toy ilay namany, fotoana voalohany nahitàn'i Montenegro dokotera ihany koa izany. 28 taona izy tamin'izany, reny tokantena niteraka telo.
“Eritreritra nahasadaikatra tokoa iny,” hoy i Montenegro. “Tsy nisy te-hijery mpitsabo zinekology izahay.”
Nanomboka nitsidika ilay toeram-pambolena ny vondrom-piarahamonin'ireo mpiasan'ny fahasalamana ary nanainga ireo vehivavy mba handeha any amin'ny toeram-pitsaboana ary hanao fizaham-pahasalamana. Tsy tia ireo mpiasan'ny fahasalamana i Montenegro, ary tsy nihevitra ny hamela azy ireo hijery ny fivaviany izy. Fa avy eo izy nieritreritra ireo zanany izay miara-miaina aminy anaty efitrano fandriana iray ao amin'ny toeram-pambolena.
“Raha tratran'ny tranganà homamiadana tena efa ambony aho, aiza ny tany ho alehan'ireo zanako?” hoy i Montenegro. “Miaraka amin'iza no azoko ametrahana azy ireo? Noho izany, nanapaka hevitra ny handeha any amin'ny tobim-pahasalamana aho ary nanao fitiliana.”
Noho ny homamiadan'ny lalan-jaza no mahafaty ny ankamaroan'ireo olona any Nikaragoà raha mitaha amin'ireo homamiadana hafa.
Te-hanova izany i Marcela Cisne. Miaraka amin'ny Fara Foundation izy, io fikambanana io izay tompon'ilay toeram-pambolena kafe, misahana ny tobim-pahasalamana ary mitantana ireo mpiasan'ny fahasalamana. Tena asa lehibe io, satria vehivavy ny ankamaroan'ireo mpamboly kafe eto.
“Tsy maintsy mikarakara tsara ireo vehivavy ato amin'ny vondrom-piarahamonina izahay satria izy ireo no dity mampitambatra ny fianakaviana manontolo,” hoy i Cisne. “Raha maty ny vehivavy iray, ohanin'izy ireo ny akoho, amidin'izy ireo ny kisoa, mirodana ny trano, maty ny vokatra satria tsy misy manondraka rano, ary mandeha sy miara-miaina amin'ny olon-kafa ny vady. Ary lasa miaraka amin'ireo raibeny sy renibeny ireo ankizy na ireo nenitoany na ireo mpiray vodirindrina. Mirodana ny vondrom-piarahamonina iray manontolo. Izany no antony itiavanay mba hahavelona ny vehivavy.”
Milaza i Cisne fa na dia manao fitiliana aza ireo vehivavy ao Nikaragoà, tsy mahita ny valiny mihitsy izy ireo matetika. Tsy manaraka akory ireo dokotera, na hoe tokony hiverina avy any an-tendrombohitra indray ireo notiliana alohan'ny ahafantarana ny valiny.
Fa milaza i Cisne fa ilay kolontsaina manambony lehilahy manambony tena ao Nikaragoà no tena tomponandraikitra lehibe indrindra amin'ilay taha ambony amin'ny fahafatesana ateraky ny homamiadan'ny lalan-jaza ao amin'ny firenena. Manana vady maro ireo lehilahy aty, ary manely ny HPV izy ireo. Kanefa ireo lehilahy ireo milaza fa fady ho an'ireo vehivavy ny mandeha any amin'ny zinekology. Ary tena kely ny fampiasàna fiarovana amin'ny firaisana.
“Milaza izao izahay rehefa manome fimailo maimaimpoana, ‘Mila manao firaisana ara-nofo voaaro ianareo.’ Hoy izy ireo, ‘Oh tsia, tsia, ho vonoin'ny vadiko aho,’”hoy i Cisne. “Mila manazava amin'izy ireo izahay avy eo, ‘Toy ny mamono anao ihany izy izao.’ Mila mampianatra io vehivavy io izahay.”
Rehefa niverina tany amin'ny toeram-pambolena kafe i Mely Montenegro, ilay vehivavy nanao fitiliana sy nandresy lahatra ny namany handeha hanao izany koa, dia manefa iraka amin'ny mba hanaovan'ireo namany fitiliana.
“Niteny ireo namako aho mba tsy ho sadaikatra hanao fitiliana pap,” hoy i Montenegro. “Satria tsy misy zavatra hafa azo ampitahàna ny homamiadan'ny làlan-jaza.”
Nilaza i Montenegro fa hampianatra ny zanany vavy izy mba ho tiliana ny homamiadan'ny làlan-jaza rehefa tonga ny fotoana. Hampianatra azy ireo izy fa tsy misy mahafady ny faniriana hijanona ho velona.